Nhau - Steel Indasitiri Yekutsvagisa Vhiki: Isina Kuwanikwa uye Inodiwa, Yakamirira kuti Inventory Ijeke.
Zvichikanganiswa nekudonha kwemitengo yebifocals vhiki ino, mari yebillet yakaderera zvakanyanya, uye mitengo yesimbi yakawira muchikamu chakafanana nebifocals, zvichiita kuti tani yepurofiti yesimbi isina kuwedzera sezvataitarisira. Chikonzero chikuru ndechekuti kunyangwe kugadzirwa kwazvino kuchekwa kunoramba kuchisimbisa, Zvisinei, rutivi rwekudiwa haruna simbawo. Tichitarisa kubva kuhuwandu hwekutengwa kwewaya spirals muShanghai, mukuwedzera kune kuenderera mberi kwekuvandudza kubva Nyamavhuvhu kusvika Gunyana, mwedzi-pa-mwedzi unodzikira zvakare mushure meMbudzi. Iyo isina kusimba yekuda kweiyo real estate kuvaka cheni inoita kuti zviome kuvandudza kudiwa kwe rebar munguva pfupi.
Ko purofiti patani yesimbi ichawedzera rinhi zvakare? Isu tinotenda kuti iyo indasitiri chain inventory inofanirwa kupedzwa zvizere. Kunyange zvazvo simbi yemazuva ano iri kuramba ichipera, kuchine kuwedzera kwe30 +% kana ichienzaniswa nekutanga kwegore, zvichiratidza kuti nhamba yacho yapera gore rose. Mushure mekunge chikamu chekuwedzera kweiyo inventory chabviswa, kukanganisa kwekupa-side kuderedzwa kwekugadzira kunogona kuratidzwa zvechokwadi.
Kubva kuhuwandu hweBusiness of Statistics, iyo yakawedzera crude simbi yakabuda munaGunyana yekutanga yaive 806 miriyoni matani uye yenguruve iron yakabuda yaive 671 miriyoni matani, yaive 2.00% uye -1.30% gore-pagore zvichiteerana. Kubuda kwesimbi yenguruve yakawira kwekutanga, uye mugumisiro wekuderedza mukugadzirwa kwakaonekwa. Kubva pakuona kwehuwandu hwekugovera uye kudiwa kudhonzwa kwesimbi, chibvumirano chekugovera chakakura kupfuura chibvumirano chiri kudiwa. Sezvo masheya anotevera akakwana, mhedzisiro yekuderedzwa kwekugadzirwa icharatidza zvishoma nezvishoma.
Iron ore uye kaviri coke ndiyo mikuru yekugadzira mari yesimbi billets. Parizvino, iron ore yakadonha kubva padanho repamusoro. Sezvo mutengo wekoki mbiri uchiramba uchidzokera kune imwe nhanho nekutonga kwemitemo, mutengo wesimbi mabheti unogona kuwedzera zvishoma nezvishoma. Kubva pakuona kwekuita kushoma kubva mukuderedzwa kwekugadzirwa, teerera kuLinggang, Fangda Special Steel, Xingang, Sangang Minguang, nezvimwewo; kubva pakuona kwekukura, zvinokurudzirwa kuterera kune: Jiuli Special Materials uye Guangda Special Materials.
Kudiwa kweterminal hakuna simba, uye zvirambidzo zvekugadzira zvinoramba zvichienderera mberi
Huwandu hwekutengwa kwehozhwa dzeshinda muShanghai hwaive matani gumi nemashanu nemazana mapfumbamwe, kudzikira kwe3.6% kubva pamwedzi wapfuura, uye kudzikira kwe17,200 matani kana zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura, uye gore negore kuderera kwe52.0%. Mwero wekushanda wekuputika kwevira vhiki ino waiva 48.48%, pasi 3.59pct kubva pamwedzi wapfuura; chiyero chekushanda chemagetsi emagetsi chaive 61.54%, pasi 1.28pct kubva pamwedzi wapfuura.
Mitengo yesimbi yakaramba ichidzika, uye bi-coke mitengo yakakwira
Iron ore ramangwana mitengo yakaderera 55 yuan/ton kusvika 587 yuan/ton, kuwedzera kwe -8.57%; coking marasha remangwana mitengo yakaderera 208 yuan/ton kusvika 3400 yuan/ton, kuwedzera kwe -5.76%; coke futures spot prices yakakwira 210 yuan/ Ton kusvika 4326 yuan/ton, kuwedzera kwe5.09%. Zvose zvakatumirwa kune mhiri kwemakungwa iron ore yaiva 21.431 mamiriyoni emamiriyoni, kuwedzera kwemamiriyoni e1.22 emamiriyoni kana 6% mwedzi-pa-mwedzi; kusvika kwese kwesimbi kubva kuchamhembe kwezviteshi kwaive 11.234 miriyoni matani, kuderera kwe1.953 miriyoni matani kana 15% kubva pamwedzi wapfuura.
Mitengo yesimbi yakaderera, gross purofiti patani yesimbi yakaderera
Kubva pakuona kwekubatsira kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvesimbi, mitengo yesimbi yakaramba ichidonha sezvo mutengo webi-coke wakakwira uye wakadonha, mari yebillet yakatanga kudonha, asi mitengo yesimbi yakadonha, uye purofiti yakawandisa patani yesimbi yakadonha. Panyaya yekuputsika, gross per tonne of long-flow rebar i602 yuan/ton, uye gross per tonne of short-flow rebar i360 yuan/ton. Cold rolling ine pundutso yepamusoro-soro, ine purofiti yakawandisa patani ye1232 yuan/ton kwenguva refu uye RMB 990/tani yenguva pfupi.
Yambiro yenjodzi: Kudzoreredza kweupfumi hwenyika hakusi sezvaitarisirwa; inflation yepasi rose inodarika zvinotarisirwa; kuwedzera kwekugadzirwa kwe ore hakusviki zvinotarisirwa; kufambira mberi kwekuvandudzwa uye kubayiwa kwejekiseni nyowani yekorona yakaderera pane yaitarisirwa.